War yaa qaraxa mas'uul ka ah ?
Cabdiraxmaan Maxamed Warsame Guure
Dhammaan ammaan oo dhan waxay u sugnaatay Allah (SWT) ee nagu manaystay nimcooyin badan oo an xisaab lahayn iyo Rasuulkiisii suubanaa Muxamed (CSW). Intaa kadib waxaan salaamaynaa guud ahaan muslimiinta gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed.
Asallamu calaykum Waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
Waxaan halkaan idiin ku soo gudbin doonaa qormo aan ugu magac daray WAR YAA QARAXA MAS’UUL KA AH?, waxaan rabaa in kaliya aan muujinno in ay imaan karaan su’aalo badan oo ku aadan qaraxyada sida joogtada ah uga dhaca magaala madaxda dalka ee Muqdisho. Qormadani cid gaar ah kuma wajahna!.
Qaraxyada sida joogtada ah uga dhaca magaalada Muqdisho ma mudan yihiin in wax laga barto?
Haddii aanba ku amba qaadno qoraalkeena su’aasha kor ku xusan, waxaa cad in ay muhiim tahay in wax badan laga barto dhacdooyinka nolosha. qaraxyada Muqdisho ka dhacaya waa qayb ka mid ah dhacdooyinka nolosha, dhacdooyinka nolosha ee xaqiiqda ah ee tagay ayaa lagu magacaaba taariikh.
Taariikhda barashadadeeda, isku hawlka qoristeedda iyo dhadhansigeeda macnaha qotada dheer ee ku duugan ayaa ah un in wax badan laga ogaado dhacdooyinkii hore u dhacay, si aysan mar labaad u soo laaban haddii ay ahaayeen kuwo khaldan.
Haddii aynu dib u raacno taariikhda qaraxyadii ka dhacay Muqdishu sanadkan waxa aad ka baranaysaa in hawgalada ka socda Muqdisho aysan kaliya ahayn kuwo ku eg kooxo argagixiso ah ama al-shabaab, waxaan daah saarnayn in danaha laga leeyahay daganaansho la’aanta Soomaaliya ay yihiin kuwo tiro beel ah, waxaan hubanti ah in dawladaha jaar ka ah iyo kuwa caalamka labaduba ay dano gaar ah oo macaash ugu duugan yahay ay ka leeyihiin daganaansho la’aanta Soomaaliya,
Weerarradii Muqdisho ka dhacay sanadkan 2017.
1: Labadii bishii janaayo waxaa ka dhacay qarax is miidaamin ah 3 qof ayaa ku dhimatay.*
2: Isla todobadii bishii janaayo qarax ka dhacay Muqdihso 3 qof ayaa isna ku dhimatay.
3: Labaatan iyo shanti bisha janaayo qarax gaari ayaa ka dhacay Muqdishu waxaa ku dhintay 28 qof.*
4: Febraayo sagaal iyo tobankeedii waxaa Muqdisho ka dhacay qarax ismiidaamin ay ku dhinteen 39 qof.
5: Maarso 13 keedi waxaa bam gaari ku dhintay 13 qof.*
6: Isla bishii maarso 21 waxaa qarax gaari ku dhintay 5 qof.*
7: Bishii abriil afarteedii waxaa isna qarax gaari ku dhintay 3 qof.
8: Abriil markiii ay ahayd 7 waxaa qarax mooto ku dhintay 3 qof.
9: Isla bishii Abriil 9keedi waxaa sidoo kale qarax gaari ku dhintay 15 qof.*
10: May siddeedeedii waxaa qarax ismiidaamin ku dhintay 8 qof.*
11: Isla bishii May 24teedi waxa sidoo kale qarax ku dhintay 8 qof.*
12: Bishii Lixaad ee Juun 15 keedii waxaa qarax gaari ku dhintay 9 qof.*
13:Isla bishii Lixaad 20keedi waxaa qarax ismiidaamin ah ku dhintay 15 qof.*
14: Gabogabadii bishii Lixaad 22 waxaa qarax gaari ku dhintay 7 qof.*
15: Bilowgii bishii todobaad 2deedi waxaa qarax jidka ah ku dhintay 2 qof.
16: Isla bishii todobaad 30keedii waxaa qarax gaari ku dhintay 6 qof.
17: Afartii bishii Agoosto waxaa qarax gaari ku geeriyooday hal qof.
18: 11 bishii Agoosto waxaa qarax ismiidaamin ah ku dhintay hal qof.*
19: Bishii Sebteember tobankeedii waxaa qarax ismiidaamin ah ku geeriyootay lix qof.*
20: Dhamaadkii bishii Sebteember waxaa qarax gaari ku dhimatay 7 qof.
21: Bishii Oktoobar waxaa Muqdisho ka dhacay musiibo qaran 358 dad ka badan ayaa ku dhintay qarax ka dhacay isgoyska soobe.
22: 28 bishii oktoobar qarax iyo weerar ka dhacay huteel naaso hablood waxaa ku dhintay dad ka badan 25 qof.*
Haddii aan ku caddayno calaamadda * tirada qaraxyada Al-shabaab ay sheegatay ee ka dhacay Muqdisho, miyeysan imaneyn su’aal ah inta kale yaa masuul ka ah?, macnuhu waa qaraxyada kale ee ka dhacay Muqdisho yaa mas’uul ka ah oo soo maleegay?.
Haddiiba ay su’aashaasi timaado, miyeysan muhiim ahayn in aan la iska indho saabin ee jawaab cad loo helo, si ay xaqiiq u noqoto riyada dadka intooda badina ku riyoodaan ee ah in mar un ay ku noolaadan Muqdisho oo nabad ah.